काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव र उनका सल्लाहकार (छायामन्त्री) राजकिशोर गुप्ताले रेकर्ड ब्रेक गरेका छन् । उनीहरुलाई सरुवामा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले समेत ताली पिटेर समर्थन जनाएका छन् ।
पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई समेत पछि पार्दै मन्त्री यादव र सल्लाहकार गुप्ताले कीर्तिमान कायम गरेका हुन् । गत २०७८ असोजको दोस्रो साता सडक विभागका सिडिइहरुले सचिव श्रेष्ठलाई मोटो रकम बुझाएर सरुवा भएको तीन महिना नबित्दै सरुवा भएपछि कसरी जागिर खाने भन्दै निन्याउरो मुख लगाएका छन् । सरुवा भएको ठाउँमा ठेक्का लगाउन नपाउँदै सल्लाहकार गुप्ताले मागे जति रकम बुझाउँदा उनीहरुको गत पुसको पहिलो साता सरुवा भएको छ ।
यस्तो अवस्थाले विभिन्न योजनाको बिजोग हुने निश्चित छ । पहिलो बालुवाटार (मन्त्री नबन्दै) को नाम भजाएर सचिवले कागती निचोरेझैँ निचोरे अहिले मन्त्रीलाई बुझाउन नसक्दा सरुवा भयो भन्दै पीडित सिडिइहरुले गुनासो गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री यादवले २०७९ भदौ १९ गते अनिवार्य अवकाश हुने सुइ दीपक श्रेष्ठलाई दुई महिना विभागको कोरिडोर हल्लाएर उत्तर–दक्षिण आयोजना र २०७९ असोज ६ गते अवकाश हुने मध्यमाञ्चल संघीय सुपरीक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका सु.इ. कैलाश श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरेकी छिन् । नि.से.नि. अनुसार एक वर्षभन्दा कम सेवा अवधि रहेकाहरुलाई सरुवा गर्न मिल्दैन । सु.इ. कैलाश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठका भाइ हुन् । उनले स्टेअर्डर ल्याएर सरुवा भएको ठाउँमा नजाने स्रोतले बताएको छ । यसअघि पनि सुइ अयोध्याप्रसाद श्रेष्ठले स्टेअर्डर ल्याएको नजिर छ । सडकमा आगामी २०७८ फागुन १ गते सुइ देवकुमार तामाङ मन्त्रालयका शिवहरि सापकोटा, २०७९ वैशाख १९ र रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराई २०७९ श्रावण १८ गते अनिवार्य अवकाश हुँदैछन् । पुसको पहिलो साता सरुवा भएका सुइहरुमा प्रेमप्रकाश खत्री, सूर्यविनायक–धुलिखेल–सिन्धुली सडक, डा. विजय जैसी संघीय सुपरीवेक्षण कार्यालय बबरमहल, दीपक श्रेष्ठ उत्तर–दक्षिण निर्देशनालय र भिमार्जुन अधिकारी ट्राफिक सुरक्षा मन्त्रालय रहेका छन् ।
यता, ठूलो भाग खान टेन्डर हालेर सरुवा भएका मेघराज मरासिनी धुलिखेलबाट विभाग, मुकुन्द अधिकारी त्रिशुली–गल्छी–मैलुङ्ग सडकबाट विभाग सरुवा भएपछि पुर्पुरो समाएका छन् । सरुवा भएका अन्य सिडिइहरुमा रवीन्द्रलाल दास मन्त्रालय, जिवेन्द्र मिश्र लाहान, सुनिल रञ्जितकार ३० लाख बुझाएर मध्यपहाडी– गोर्खा, दिपेन्द्र पाण्डे मध्यपहाडी धुलिखेल (मोटो रकम बुझाएको चर्चा), अंगलाल रोकाय सडक विस्तार, रामकुमार देव विभाग, विदुर पोखरेल शिवपुरबाट इलाम र श्याम यादवलाई मन्त्रालय सरुवा गरिएको स्रोतले बताएको छ । यो सरुवामा पनि डिजी निरीह बनेको चर्चा छ ।